Top 5 Beddelka WinRar ee Bilaashka ah ee Windows | Golaha Moobaylka
Top 5 beddelka WinRar ee bilaashka ah ee Windows
WinRAR waa software ka feylasha ugu caansan adduunka. Waxaa laga heli karaa nidaamyo badan oo hawlgal ah waana loo isticmaalaa, si kastaba ha noqotee waxaa jira fursado badan oo u dhigma oo xitaa hagaajiya astaamaheeda. Qoraalkan waxaan ku eegaynaa waxa ay yihiin Top 5 beddelka WinRar ee bilaashka ah ee Windows taas oo hada la heli karo.
2 B1 Diiwaan Bilaash ah
6 Maxay tahay inaad u isticmaasho WinRAR?
7ZIP waxaa loo tixgeliyaa inay tahay bedelka ugu wanaagsan ee WinRar
7-ZIP waa software furan oo furan oo laga soo dejisan karo kombiyuutar kasta, ha ahaato adeegsiga guriga iyo ganacsiga, diiwaangelin la’aan iyo lacag la’aan. Waxay ku habboon tahay Windows (10, 8, 7, Vista iyo XP), Linux iyo macOS. Waxaa lagu heli karaa luqado badan. Rakiibideedu waa dhakhso isticmaalkeeduna waa mid aad u fudud.
Waxa uu soo muuqday 1999 si uu u noqdo Tartanka weyn ee WinRar. Xaqiiqdii, siyaabaha qaarkood way ka fiican tahay isaga. Tusaale ahaan, 7ZIP waxay bixisaa a saamiga fahamka wanaagsan oo waxay taageertaa tiro badan oo qaabab ah (way cadaadin kartaa faylasha .zip, .bz2, .tar, .xz, .wim y .swm, iyo sidoo kale hoos u dhig ku dhowaad nooc kasta oo fayl ah). Qaabkeeda asalka ah, mid u gaar ah oo bilaash ah in la isticmaalo, ayaa ah .7z.
Algorithm koodh ee barnaamijkan iskiis u-horumarsan wuxuu tayada ka hor marinayaa xawaaraha. Weli, way muuqataa inay ka dhakhso badan tahay WinRAR. Ku saabsan su'aasha ah seguridad, waxay kujirtaa sirta AES-256 ee qaababka 7z iyo ZIP. Dhinaca kale, waxay leedahay qalab loogu kala qaybiyo faylasha qaybo siman, iyo sidoo kale is-dhexgal dhammaystiran oo ku jira Windows File Explorer.
Sababahan iyo kuwo kale oo badan awgood, barnaamijkan waxaa lagu abaal mariyay 2007 abaalmarintii mashruuca isha furan ee ugu wanaagsan SourceForge. Aragtida guud ee isticmaaleyaasha ku saabsan barnaamijkan ayaa ah inay tahay waxyaabaha ugu fiican ee lagu beddeli karo WinRar maanta jira.
Soo dejiso Xiriirka: 7-ZIP
B1 Diiwaan Bilaash ah
Beddelka WirRar: B1 Diiwaanka Bilaashka ah
Mid kale oo ka mid ah xulashooyinka ugu caansan ee lagu beddelayo WinRar maaddaama barnaamijkeenna lagu cadaadiyo oo lagu jajabiyo feylasha tixraaca ayaa ah B1 Diiwaan Bilaash ah. Waa barnaamij il furan oo lagu heli karo in ka badan soddon luqadood oo leh noocyo rasmi ah oo loogu talagalay Linux, Mac, Windows iyo Android. Waxa kale oo jira aalad decompression Online ah B1 Free Archiver
Waxaa la soo saaray 2011 by Adam Iibsade, B1 Free Archiver ayaa naga caawin doonta inaan hoos u dhigno noocyada faylalka ugu caansan uguna badan ee la isticmaalo (.b1, .zip, .rar, .gzip, .7z, tar.gz, tar.bz2, .iso iyo kuwo kale oo badan). Si kastaba ha noqotee, waxaad kaliya ku cadaadin kartaa faylashaada (.b1) y .zip. Ku saabsan seguridad, wuxuu leeyahay AES 256-bit encryption oo ah habka ilaalinta, si aan feylasha loo aqrin karin ama loo soo saari karin bilaa lambarka sirta ah.
Sus menus macnaha guud iyagu waa kuwo aad wax ku ool ah waxayna bixiyaan ikhtiyaarrada aasaasiga ah iyada oo loo marayo toobiye toos ah iyo mid fudud. Tusaale ahaan, adiga oo gujinaya badhanka midig, ikhtiyaarka "halkan ka fur" ayaa ka soo muuqan doona shaashadda, oo ay weheliso ikhtiyaar labaad "qallaji" kaas oo kuu oggolaanaya inaad xulashada goobta aad ku socoto gacanta.
Soo dejiso Xiriirka: B1 Diiwaan Bilaash ah
IZArc waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan ee lagu cadaadiyo laguna tirtiro faylasha
Oo ay la socdaan WinRar, waxaa jira barnaamij kale oo riixo fayl iyo decompression: IZArc (loogu dhawaaqo "fudud qaanso"). Waa barnaamij adeegsi oo bilaash ah, in kasta oo aanu ahayn madal furan, oo uu abuuray 10 sano ka hor Bulgaria Ivan Zahaviev. Noockeedii ugu dambeeyay ee xasilloon ayaa la sii daayay 2019.
Waxaa ka mid ah wanaagga weyn ee IZArc awooddeeda u adkeysiga qaabab aan tiro lahayn (.7z, .arc, .arj, B64, .bh, .bin, .bz2, .c2d, .cab, .cdi, .cpio, .deb, .enc, .gca, .gz, .gza, .img, ISO, .jar, .tha, .lib, .lzh, .mdf, .mbf, .mim, .nrg, .pak, .pdi, .pk3, .rar, .rpm, .tar, .taz, .tbz, .tgz, .tz, .uue, .dagaal, .xpi, .xxe, .yz1, .zip, .zoo.). Uma baahna nooc kasta oo rakibid ah, halka xawaaraha hawshiisa riixitaanka iyo decompression uu la mid yahay kan 7 ZIP iyo WinRar.
Liiskeeda dheer ee astaamaha waxaa ka mid ah beddelidda feylasha CD-ga iyo sawirrada, la shaqeynta sawirrada diskiga, hagaajinta feylasha burburay, iskaanka malware-ka, iyo WinZip-ku habboon isqarin.
Hal meel oo ay IZArc si cad uga waxtar badan tahay WinRar iyo xulashooyinka kale ayaa ku jira interface, aad u casri ah oo si fudud loo isticmaali karo. Waxyaabaha kale, waxay kuu ogolaaneysaa inaad jiido oo aad hoos u dhigto feylasha Windows Explorer. Maaddaama ay tahay khasaaraha ugu weyn, waa in la ogaadaa taas kaliya la shaqeeya Windows nidaamka qalliinka.
Soo dejiso Xiriirka: IZArc
PeaZIP, oo ah softiweer kumbuyuutar fayl ah oo wareegsan
Waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu beddeli karo WinRar ee aannu ku haysanno bilaash ahaan Digir darajooyin sare. Waxay ahayd Giorgio tani kaasoo soo saaray sanadkii 2006 barnaamijkan isdabamarinta xogta bilaashka ah ee furan ee loogu talagalay Microsoft Windows, GNU / Linux5 iyo BSD. Waxa kale oo jira nooc aan u baahnayn in lagu rakibo kumbuyuutarka oo laga soo rogi karo warbaahinta keydinta ee dibadda, sida USB memory stick.
PeaZIP waxay kuu ogolaaneysaa inaad isku cadaadiso oo aad kala furfurto noocyada faylka ee soo socda :.7z, .arc, .bz2, .gz, .paq, .pea, .quad, .split, .tar, .upx iyo .zip, qaar ka mid ahi aad uma badna. Dhinaca kale, waxay sidoo kale baabi'in kartaa faylasha (in kasta oo aan la cadaadin karin) .ace, .arj, .bz, .cab, .chm, .cpio, ISO, Java, .lzh, .lha, .rar, .wim, .xpi y .cup. Faa’iido darradeeda ugu weyni waa taas nama caawinayso inaan la shaqeyno faylasha ku jira .rar.
PeaZIP-ka ayaynu ku saxi karnaa, ku keydin karnaa kuna soo celin karnaa nashqadaha feylka, iyo sidoo kale inaan ku dabaqno miirayaal kala duwan waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waxay leedahay nidaam amni oo aqoonsi labalaab ah oo xawaarekeedu sarreeyo. Marka laga reebo howlaheeda aasaasiga ah, waxay siisaa kuwa kale sida kala qeybinta ama ku biirida feylasha iyo waliba tirtirka iyaga oo badqaba.
Soo dejiso Xiriirka: Digir
Waxyaabaha ugu muhiimsan zip weel waa awoodaada inaad furtid nooc kasta oo faylal ah. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah utility-ga ugu fiican ee wax lagu riixo ee loogu heli karo nidaamka hawlgalka Windows-ka si bilaash ah.
Sida barnaamijyada kale ee la midka ah iyo beddelka WinRar, sidoo kale way abuurtaa faylasha la ilaaliyo adoo adeegsanaya sirta AES-256. Sidoo kale dhanka amniga, ZIPware waxay leedahay awood u leh inuu iskaan faylasha shakiga leh adoo adeegsanaya adeegga VirusTotal. Dhinacani waa mid aad wax ku ool u ah tan iyo, haddii la ogaado in feyl la soo duubay uu shaki ku jiro, muhiim maahan in la rakibo oo gacanta lagu sawiro Shaqadan waxaa gacanta ku haya softiweerka laftiisa.
Xawaaraha ZIPware ee nidaamka isku-buufinta iyo kala-soocidda ma gaarto diiwaanka 7-ZIP, laakiin way dhowdahay Dhammaan astaamahan guud ahaan waxay muujinayaan barnaamijkan inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee la heli karo iyada oo aan wax lacag ah laga bixin.
Soo dejiso Xiriirka: zipware
Ka baxay liiska 5 beddel WinRar ee ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee barnaamijyada Windows sida Soosaarida Hada, Zipeg o Soosaaraha Universal, maaddaama qalabkani kaliya naga caawinayo inaan kala-baxno faylasha, laakiin maaha inaan cadaadinno. Taabadalkeed, waxaa haboon in lagu daro laba magac: HaoZIP iyo Ultimate ZIP.
HaoZIP Waa barnaamij aad ula mid ah WinRar, oo awood u leh isku-buufinta iyo kala-goynta xawaare sare oo aan si fiican ugula talin karno xulashooyinka hore. Ma laha nooc Isbaanish ah. Dhanka kale, ZIP-ga ugu dambeeya waxay bixisaa suurtagalnimada is dhexgalka Windows-ka waxayna ka shaqeyn kartaa isku-dubaridka nidaamyada antivirus ee kala duwan. Liistada qaababka la heli karo ayaa ka maqan noocyo faylal ah oo caan ah sida .7z o .pm.
Ugu dambeyntiina, kuwa doonaya inay lacagtooda ku bixiyaan, waxaa ka mid ah beddelka WinRar ikhtiyaarrada lacag bixinta ee weyn sida WinZip, BrandZip, FreeARC ama WinACE.
Maxay tahay inaad u isticmaasho WinRAR?
In kasta oo beddelka aan aragnay, haddana ma iloobi karno in WinRAR uu ahaa oo ka mid ah barnaamijyada riixa faylka ugu horreeya. Isku soo duubista faylasha waxay ahayd sidan xal aad wax ku ool ah si loo badbaadiyo meel lagu kaydiyo diskigaaga adag. WinRar waxaa loo sii daayay ujeedkan 1993.
Laakiin xitaa maanta, marka xitaa kumbuyuutarrada ugu fudud ay horey u leeyihiin xusuus ka weyn sidii loo isticmaali jiray sannadahaas (qaybaha waaweyn ee SSD ama HDD), barnaamijyadan wali waa la isticmaalaa. Adeeggeeda hadda jira waa kan meel dhexe u dhig macluumaad fara badan, si aad awood ugu yeelatid inaad ugu wadaagto hal feylal, qaab raaxo leh.
Sababtaas awgeed, WinRAR wali waxaa loo adeegsadaa in lagu cadaadiyo feylasha, la dhex dhigo macluumaadka iyo, isla mar ahaantaana, loo kordhiyo meel disk bilaash ah. Waxaas oo dhan iyadoo la adeegsanayo algorithms-ka isku-buufinta u gaarka ah iyo iyadoo la adeegsanayo sii ballaarinteeda .rar. Isagoo ka hadlaya qaabka riixitaanka laftiisa, barnaamijku wuxuu bixiyaa noocyo kala duwan ikhtiyaariyada marka loo eego nooca qoraalka (LZMA2, LZMA, PPMd ama BZip2), cabirka faylka iyo heerka riixitaanka.
Muuqaal kale oo caan ah oo WinRAR ah ayaa ikhtiyaar u ah password ilaaliyo faylasha. Tani waxay damaanad qaadeysaa in qofna uusan heli karin xogta isagoon aqoon sirta. Nabadgalyada weyn, suurtagalnimada in la qariyo magaca faylasha la isku daray ayaa sidoo kale lagu daray.
Ugu dambeyntiina, waa in la ogaadaa in WinRAR ay tahay barnaamij wax lagu cabiro oo la bixiyo, in kasta oo ay bixiso muddo 40 maalmood ah oo tijaabo ah. Boggeeda rasmiga ah waxaad ka heli kartaa nooca Windows 10 iyo kuwa kale oo loogu talagalay nidaamyada hawlgalka ee taleefannada casriga ah. Sidoo kale waa loo soo dejisan karaa Linux iyo MacOS, inkasta oo aan lahayn jawi garaaf ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Top 5 beddelka WinRar ee bilaashka ah ee Windows
Top 5 beddelka Hamachi